Marketpath - Fitantanana votoaty tsotra | Martech Zone
Sabotsy, Oktobra 24, 2009 Alakamisy, Desambra 5, 2013 Douglas Karr
Volana vitsivitsy lasa izay dia nitsidika ny ekipa aho tamin'ny Marketpath ary nahazo fampisehoana ny rindranasan'izy ireo ho toy ny Serivisy (SaaS) rafitra fitantanana atiny (CMS) - izay misy ny vahaolana amin'ny bilaogy ecommerce sy fototra. Efa naheno zavatra betsaka momba ilay orinasa aho saingy nahafinaritra ny nahazo demo tamin'ny farany ary nahita ny zava-bitany.
Matt Zentz dia iray amin'ireo mpiara-manorina ny Marketpath ary niasa tamin'ny ExactTarget tamin'ny andro voalohany. Tsy nafeniny ny zava-misy fa nisy ifandraisany tamin'ny androny tamin'ny voalohany ny endrik'izy ireo tsotra ExactTarget. Fihetsika tsara izany. Ny ankamaroan'ny rafitra fitantanana atiny dia tena mitaky fiankinan-doha mideza handehanana. Ny Marketpath dia nitandrina ny azy ireo ho tsotra sy mora ampiasaina. Raha hainao ny manokatra programa amin'ny Windows na amin'ny Mac, dia afaka mampiasa MarketPath ianao.
Pikantsary amin'ny fitantanana CMS Marketpath
Pikantsary an'ny Editorpp CMS Marketpath
Pikantsary an'ny Security Marketpath CMS
Pikantsary an'ny Marketpath CMS Google Analytics
Araka ny hitanao amin'ny pikantsary dia rindranasa tsotra tsy mampino hampiasaina - fa afaka manangana tranokala sy magazay an-tserasera sarotra be miaraka aminy ianao. Harry Potter Wall Art dia mpanjifa vao haingana an'ny Marketpath izay manome ny fijeriny ny hamafin'ny lohahevitrao sy ny tsy fitovizan'ny vahaolana amin'ny tranokala sy ny ecommerce.
Nandritra ny Marketpath, DK New Media nanome hevitra momba ny fanatsarana ny tranonkala ho an'ny fikarohana. Tiako ny manampy ireo orinasam-paritra misy anay ary misy fampanantenana marobe amin'ny vahaolana Marketpath!
Marketpath dia manana ekipa tsara sy vahaolana tsara. Raha manapa-kevitra ny hiantso azy ireo ianao dia alao antoka fa hampahafantaro azy ireo fa mamaky momba ny vahaolana izy ireo Martech Zone!
Tags: CMSfitantanana votoatyrafitra fitantanana atinysehatra ecommercetsenasaassaas cms